HomeWararka CiyaarahaSaadaasha Mark Lawrenson ee Kulamada 15aad Premier league, Man United Vs Crystal Palace, iyo Wolves Vs Liverpool
Khabiirka BBC Sport ee Mark Lawrenson ayaa sidii looga bartay sameeyay saadaashiisa horyaalka Premier League, iyadoo xalay uun lasoo xidhay wareega 14-aad ayaa lagu wadaa in wareeg 15-aad uu bilaabmi doono Sabtida berri ah.
Tobbanka kulan ee Usbuucan ayay ugu muhiimsan yihiin kuwa dhex mari doona Chelsea oo ciyaar London Derby ah booqanaysa West Ham United iyo Arsenal oo Goodison Park ugu tagaysa Everton walow ay kooxda tababare Rafael Benitez hoos u dhac weyn ku jirto bilahan ugu dambeeyay.
Aan ku bilawnee ciyaarta dhex maraysa kooxaha West Ham United iyo Chelsea ayuu Mark guul u rajeeyay Blues isaga oo qaba inay London Stadium kaga soo adkaan doonaan Hammers.
Ciyaarta ay Liverpool u tagayso Wolves oo qaab ciyaareed fiican kusoo jirtay kulamadan ugu dambeeyay ayuu sidoo kale Lawro aaminsan yahay in kooxdiisii hore ay guul soo gaadhi doonto.
Manchester City oo iyaduna booqanaysa Watford oo halis yeelatay tan iyo magacaabistii Claudio Ranieri ayuu qabaa in Sky Blues ay guul sahlan kasoo gaadhi doonaan Hornets oo Vicarage Road jooga.
Tottenham ayuu aaminsan inay guushii saddexaad ee xidhiidh ah kulamada horyaalka la gaadhi doonto tababare Antonio Conte marka ay soo dhawaynayaan Norwich City Axada.
Man United oo uu kulankii ugu horreeyay hoggaamin doono tababare Ralf Rangnick ayuu qabaa inay Old Trafford guul kaga gaadhi doonaan Crystal Palace iyo tababare Patrick Vieira.
Ugu dambayn, Arsenal oo gobolka Merseyside ugu tagaysa Everton ayuu Lawrenson qabaa inay guul kasoo gaadhi doonaan Toffees oo xaalada kusii xumayn doonaan Rafa Benitez.
Saadaasha Lawro Ee Wareega 15-aad Oo Dhammaystiran
Newcastle 0-2 Burnley
Everton 1-2 Arsena